ချစ်ကြည်အေး: ရင်ကိုထိစေခဲ့သော ခရီးစဉ်လေးတစ်ခု
ပြန်နွှေးဦးမှ....။ စစ်ကိုင်းတောင်တန်းကြီးတွေဆီက ပြန်လာပြီ။ မှတ်မိတယ်နော်...။ ကဲ ခု စစ်ကိုင်းကနေ ရွှေမန်းမြို့ကိုမဆင်းဘဲ ဟိုး အောက်ပြည်အောက်ရွာကို ပြန်ဆင်းကြပါစို့...။ အရင်က X-မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြို့ရန်ကုန်ကို ပြန်သွားကြမယ်။ ရင်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ခု ဆိုပါတော့၊ အဲဒီဖြစ်ချင်မှုလေးတစ်ခု ဖြစ်မြောက်ခဲ့တာမို့ အဲဒီတစ်ခုနဲ့တင် အတော်လေး စိတ်ကြေနပ်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်ပါပဲ။
ထုံးစံအတိုင်း အမေ့လွမ်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရန်ကုန်ပြန်ရင် ဘယ်တုန်းကမှ အိမ်မကပ်တဲ့ကျွန်မက အဲဒီနေ့ကလည်း ညနေမှောင်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အဖွားဘက်က အမျိုးတော်တဲ့ ရွှေဘိုစုရွာက အစ်မကြီးနှစ်ယောက်...။ ဒါနဲ့ အင်္ကျီမလဲသေးဘဲ သူတို့နဲ့ထိုင်ပြီး အာလူးဖုတ်ပါတယ်။ အာလူး ၃လုံးခန့်အကျက်မှာ အစ်မတစ်ယောက်က "ညည်း ရွာ တစ်ညလောက် လိုက်အိပ်ပါလားအေ"...တဲ့။ သူပြောမှပဲ ကျွန်မတွေးမိတော့တာက ငါ ရွာကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ရောက်ခဲ့တုန်းက ဘယ်နှနှစ်ကပါလိမ့်လို့ ပြန်စဉ်းစားယူရတယ်။
အေးလေ...သူတို့လည်းပဲ နိူင်ဂျန်ဂါးက ခဏ ပြန်ရောက်နေတဲ့ ညီမတော်ကို ရွာခေါ် မျက်နှာပြချင် ရှာပေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ကျွန်မမှာ ညဘက် အပွိုင့်မန့်တွေ ပြည့်နေခဲ့တာ။ ဟိုသူငယ်ချင်းနဲ့ ဒင်နာ၊ ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ ညစာ၊ ဟိုလူနဲ့ ထမင်းစားပွဲနဲ့...အို ညဘက် အချိန်အားကို မရှိတော့တာ။ ဒါနဲ့ " နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရရင် လိုက်မယ် အမရယ်၊ ဒါထက် အမတို့ရွာမှာ မူလတန်းကျောင်း ရှိတယ်နော်" ဆိုတော့ "ရှိတာပေါ့ဟ၊ ပထမဆုံးထွက်တဲ့ကားနဲ့လိုက်ရင် နေ့ချင်းပြန်ရောက်တယ်" ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ နောက်တနေ့ မနက်စောစော ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်ရပါတော့တယ်။
စောစောအိပ်ကြပါ။ ကျွန်မနဲ့အတူ လိုက်မယ်ဆို မနက်ဖြန် အစောကြီး အိပ်ရာထရပါမယ်:)) မထွက်ခင် ကင်မရာအိတ်ကို အရင် စစ်ဆေးရပါတယ်။ အကုန်စုံပြီဆိုမှ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ချမ်းချမ်းစီးစီးမှာ အိမ်က ထွက်ကြတယ်။ အိမ်ကထွက်တော့ မနက် ၅နာရီတောင် မထိုးသေးဘူး။ အဝေးပြေးကားဂိတ်ကို ကျွန်မတို့ရောက်တော့ ရွာက အမနှစ်ယောက်က ရောက်နှင့်နေခဲ့ပြီ။ မျက်နှာမှာတောင် သနပ်ခါးပိန်းကျားရိုက်လို့။ တကယ်ဆို နံနက်ခင်းက ပီပီပြင်ပြင် လင်းတောင် မလင်းချင်သေးဘူး။ ကားဂိတ်မှာ ပေါက်စီဝယ်စားတယ်။ အို အစွဲကြီးလိုက်ပုံများ ဒါကမှ ငတို့ရွာကပေါက်စီဆိုပြီး ၂လုံးကြီးများတောင် တီးပစ်လိုက်တယ်။ သမာဓိကားဂိတ်ကဝယ်ပြီး ကားလက်မှတ်ဖိုးကို အစ်မတွေပဲ ပေးပါတယ်။ မအူပင်အထိကို ခန့်မှန်းခြေ ၃နာရီသာသာပဲ မောင်းရ မှာဖြစ်ပြီး ကားခက တယောက် တစ်ထောင်ပဲ ပေးရပါတယ်။ တန်လိုက်တာ ဆိုတာ...အားနေလို့ကတော့ ရန်ကုန်-မအူပင် လွန်းထိုးတောင် စီးလိုက်ချင်သေးတယ်။
သာမင်ညောင်ညကား မှတ်နေလား...မအူပင် တက္ကသိုစ်စ်ကို ရောက်တဲ့ကား...
ဖူဂျီဘတ်စ်တဲ့...ဂျပန်ကို မသွားဘူး၊ ဒေးဒရဲ ဆိုလား၊ ဘာလား ညာလား...
ပြောင်းပြုတ် ပူပူလေး...ရမယ်...(သူအော်တာ အလယ်က ဖူး ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ရှာတယ်)
ဝယ်ဦးမလား အစ်မ ဇီးသီး ဇီးယို ချိုတယ်လေ...
အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ ဝယ်မစားရဲဘူး။ အရင့် အရင်အတွေ့အကြုံအရ ပန်းကမ္ဘာလေးထဲ ရောက်ရောက်သွားလို့ ခရီးသွားတိုင်း လူရော စိတ်ပါ ပင်ပန်းခဲ့ဖူးတာ။ ဒီတော့ ကားပေါ်ကနေ စိတ်နဲ့ပဲ တွင်တွင်ကြီး ပစ်မှားနေခဲ့ရတယ်။ ပိတ်သတ်ကြီးကို အစားအသောက်တွေ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်ပေးခဲ့မိတာ ချက်ချင်း ဝဋ်လည်တာပဲ...
ဂွတိုရေ...ငါပြန်လာပြီဟေ့....(ဓါတ်ရှင်တွေထဲမတော့ အဲလို အော်မှာ...:)
အဘတစ်ယောက် နောက်ဖေးအဖီလေးမှာ ထိုင်နေတာ...အေးအေးလူလူ
မီးပွိုင့်မရှိ၊ ပလက်ဖောင်းမရှိ၊ နားလည်မှုပဲ ရှိတယ်။ အားလုံးက My Grandmother's road, My Great Grandpa's road လို့ သဘောထားပြီး လျှောက်ကြတယ်၊ အေးဆေးပဲ...
ဒါ တကယ်သွားမဲ့ရွာ မဟုတ်သေးဘူး။ မအူပင်မြို့မှာ ခရီးတစ်ထောက်နားရင်း၊ ဘုရားလည်းဖူး၊ အမျိုး တစ်ယောက်အိမ် ထမင်းလည်း ဝင်စားခဲ့တာ...။
ဟင်...မချစ်ကြည်အေးပြောတော့ ရင်ကို ထိစေသော...ဘာညာနဲ့ ခုချိန်ထိ ဘယ်ကိုမှလည်း မထိသေးပါလား...။ လာမှာပါ...။ နောက်တပိုစ့်မှာ ထိချင်တဲ့နေရာကို ထိပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှည်ရှည် ထားကြပါ။
အပိုင်း ၂ မျှော့....
at June 11, 2011
ညိမ်းနိုင် Sat Jun 11, 11:40:00 PM GMT+8
အေးအေးလူလူထိုင်နေတဲ့ အဘ ဒါ့ပုံလေးကိုသဘောကျတယ်ဗျ...၊အပိုင်း၂ ကိုမျော့နေဘီ.....:)
မိုးယံ Sat Jun 11, 11:42:00 PM GMT+8
zue Sun Jun 12, 12:26:00 AM GMT+8
အားကျလိုက်တာ .. ဇူးလည်း အဲလို လျှောက်သွားချင်တာ.. ဒီမှာနေရတာ ပျင်းနေပြီ...
seesein Sun Jun 12, 12:31:00 AM GMT+8
အမချစ်နော် အစားနဲ့တင် နှိပ်စက်လို့အားမရသေး ပို့စ်နဲ့လဲ နှိပ်စက်တာပါဘဲလား အပိုင်း ဘယ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးမှ ထိမှာလဲ ဟင်..မျော့နေမယ်နော် ပြောင်းပြုတ်စားလို့ မျော့ချင်မျော့ဗျာ အမျော့ခံမယ် အဟက်
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် Sun Jun 12, 01:45:00 AM GMT+8
ဟတ်ထိတော့မယ် အမြန်ကာထားမှ....ခိခိ။ တုတ်တုတ်လေးစီးချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။
မိုးချိုသင်း Sun Jun 12, 02:47:00 AM GMT+8
မမ ခဥမ ရန်ကုန်ကို အပိုင်းပိုင်းတစ် သလို သူ့ရွာလေးကိုလဲ ပိုင်းတော့မယ် ထင်တယ်။ ပြောင်းပြုတ်နဲ့ ဆီးယိုမှာတင် လူက မျော့နေပါပြီ။ သနားညှာတာပါ။
Cameron Sun Jun 12, 08:59:00 AM GMT+8
အင်..... မကြီးကလဲ ကိုးရီးယားကားလိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့....။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Jun 12, 10:30:00 AM GMT+8
Anonymous Sun Jun 12, 11:15:00 AM GMT+8
မြင်ကွင်းတွေ ကြည်.ပြီး ရင်ကိုထိနေပါပြီ.. အချိန်သာပြောင်းသွားမယ် သူတို.ကတော. ဒီအတိုင်းပဲ
ဇွန်မိုးစက် Sun Jun 12, 11:26:00 AM GMT+8
အစ်မချစ် စာသံထဲမှာ ကိုတီ့စာသံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူနေသလိုပဲ။ စာဖတ်သူကို ဆွဲ..ဆွဲ ထားတာ။ အဟိ ... :D
SHWE ZIN U Sun Jun 12, 12:41:00 PM GMT+8
အမျိုး တစ်ယောက်အိမ် ထမင်းလည်း ဝင်စားခဲ့တာ...။
ဆိုတော့ ညီမ ရေ နောက်တပိုစ့် တော့ သေချာပေါက် ထိတော့မယ်ထင်တယ် အင်း မအူပင် မှာ စားတာ ဆိုတော့ အမ စိတ်ကြိုက်တွေ ဘဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် မျှော်နေပါတယ် ထိ ခါ မှ ထိရော
rose of sharon Sun Jun 12, 06:46:00 PM GMT+8
ရင်ကိုထိတဲ့အပိုင်းမရောက်သေးပေမဲ့ ပုံလေးတွေက ရင်ထဲငြိပါတယ်....
ညီလင်းသစ် Sun Jun 12, 11:03:00 PM GMT+8
ပြောင်းပြုတ်ဆိုတာ နာမည်အသစ်လေ..၊ အရင်တုန်းက 'ပြောင်းဖူး(ဘူး) ပြောင်းဖူး(ဘူး)' ဆိုပြီး တချို့တွေက အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး အော်လွန်းလို့ ဈေးသည်တွေက negative sense ပါတဲ့ ဖူး(ဘူး) ကို ဖြုတ်ပလိုက်တာ...ကဲ၊း)
နေ၀သန် Mon Jun 13, 11:16:00 AM GMT+8
း).. မျှော့သွားတာပဲ... :D
မြစ်ကျိုးအင်း Tue Jun 14, 12:15:00 AM GMT+8
ထိချင်ရင်ထိစေတော့.. ၁ ကနေ စဖတ်တယ်။
ကော်မန့်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထင်မြင်ခံစားရသလိုသာ ရေးခဲ့ပါရှင်
နှင်းတွေဘယ်တုန်းကမှ မကျတဲ့မြို့မှာ ကျွန်မနေတယ် ဖြစ်နိူင်တာမဖြစ်နိူင်တာ ကျွန်မ မပိုင်တဲ့အရာ မျှော်လင့်တတ်ရုံပါ... အဲဒီမနက် လက်ဘက်ရည်ဝိုင်...
မြစိမ်းတောင်တောရ ဖားအောက်တောရ SMC ဗုဒ္ဓ-ဓမ္မ-သံဃာ့-လောက အသင်းတော်ကြီး
မချောရဲ့ အမှတ်တရ စုစည်းမှုနဲ့ ဦးညီရေးတဲ့ ကိုကြီးေ...
ဤ = ကျွဲ
အမှတ်တရ / ဘလော့ဂ်စာ
ဈေးဝယ် / အစားအသောက် အညွှန်း
အိပျမကျ..... - ငါလညျး X-boxin နဲ့ G fatt ကွိုကျတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျပဲလို့ (ကောငျမလေးတော့မဟုတျတော့ဘူးပေါ့ ဒါပမေယျ့ ကောငျမလေး)ကမြ လူတဈယောကျကို နောကျတောကျတောကျပွောဖူ...
အထီးကနျြခွငျး အနုပညာ... - လူတှအေမြားကွီး ပတျလညျဝနျးရံထား၊ စကားတှေ ဆူညံပှကျလောရိုကျ၊ သီခငျြးသံတှေ ဆူညံနတေဲ့ကွားတဲ့မှာ တယောကျတညျး အထီးကနျြတဲ့ ခံစားမှုမြိုး ခံစားဖူးသလား။ ၂၀၂၂ ဇူလှိ...
စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ
အိမျမကျအဟော - ၂၀၁၂ ခုနှဈထဲက တငျထားတဲ့ ပို့ဈလေးက စာတှေ ပွောငျးပွနျဖွဈနပွေီး ဖတျလို့မရဘူးလို့ လာလာပွောကွတဲ့အတှကျ အခုတဈဖနျ ပွနျလညျတငျပေးလိုကျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အိမျ...
သဟဇာတ ... - ရဲရဲကို သငျတဲ့ Science မှာ adaptation သငျခနျးစာ ​ရောကျ​တော့ adaptation နဲ့ပတျသကျပွီး သူနားလညျ​အောငျ အမြားကွီး​ ပွောပွရတယျ။ . Adaptation ဆိုတာ သကျရှိ​တှရေဲ့...
ညှျောလိုကျကွစို့ .. - ဟိုးအရငျ ပဝသေနီက ငရုတျသီးနှမျးကပျကွျောပါ။ ဘလော့လညျးမဖှငျ့တာကွာလို့ ပွနျတငျဖွဈတာ.. (အခုအခွအေနမှောတော့ တဈခါတဈလေ စိတျနဲ့လူတောငျ ကပျခငျြမှ ကပျတော့တာ ) ငရုတျသ...
sosegado တည် ငြိမ် အေး
ထိုးရတော့မညျ ဆိုသျောကွောငျ့ - ထိုးရတော့မညျ ဆိုသျောကွောငျ့ ကာကှယျဆေးကိုထိုးရတော့မညျဖွဈသဖွငျ့ နညျးနညျးလလေ့ာမိခဲ့သညျ။ ကာကှယျဆေးရာဇာဝငျတှငျ Risk % အမြားဆုံးကာကှယျဆေးဖွဈသညျ၊ စမျးသပျမှ...
ကောငျးကငျတဈခှငျသို့ - မွူနှငျးတှဝေနေတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြတဈခှငျ မှုနျဝါးဝါးအမွငျနဲ့ အေးခမျြးလှတဲ့ ဆောငျးညရဲ့ ခရစ်စမတျ ညတဈည… နှေးထှေးတဲ့ မိသားတဈစုရဲ့ ပြျောရှငျ ကွညျနူးမှုမြားနဲ့အ...
စာပေဆု ၂၀၂၀ - ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အခုလို ဆုတွေ ပေးနိုင်တာ အင်မတန်မှ ဝမ်းသာစရာေ...
ဒီဇငျဘာဘလော့ဂျမှသညျ ... နိုဝငျဘာနှငျးဆီသို့ - Coral Reef blog လေးရဲ့ သကျတမျးဟာ ဒီကနေ့ (၁၁) နှဈတိတိ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပါပွီ။ ဇှနျ့ဘဝရဲ့ ထူးခွားဖွဈစဉျတှတေိုငျး အရေးပါလရှေိ့တဲ့ ‘ဆယျ့တဈ’ ဂဏနျးဟာ ၂၀၂၀ မှာ...
Myanmar Currency Exchange Rates WordPress Plugin by MWD - Myanmar Currency Exchange Rates ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Myanmar Exchange Rates WordPress Plugin ကို အသုံးပွုခွငျးဖွငျ့ လူကွီးမငျးတို့ Website အတှငျးမှ...
Alin Kar Nya
I couldn't help it !!! - *I couldn't help it !!!* *Daryl* I am upset. Somebody told my boss I haveapart-time job. *Smith* And he doesn't like that ? *Daryl* No, he doesn't. He ...
A SMILING FLOWER
Soon to be moving new home - အရှယျပွောငျးလို့ အတှေးပွောငျးပါပွီ ဒီစာမကျြနှာကနေ နုတျဆကျပါတော့မယျ ဘလော့တခုလုံးကို သိမျးပွီးတဲ့အခါ ဒီစာမကျြနှာလေး သော့ခတျပါတော့မယျနျော/ ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြ...
တောငျတကျခွငျး - လူ့ဘဝဆိုတာ တာထှကျခွငျးတူတာ မဟုတျခဲ့သလို ပွေးပှဲတဈခုလညျး မဟုတျခဲ့ပါဘူး။ ကှငျးတဈပတျလညျတော့ အရှရေ့ောကျတဲ့လူက အနောကျရောကျပွီး အနောကျရောကျတဲ့ လူကလညျး အရှေ့ ရေ...
Lock Down - အလငျးတှအေားလုံးကိုပိတျ မကျြစိတှကေိုမှိတျထားလိုကျတယျ။ အလငျးမဲ့သှားတဲ့ အမှောငျကမ်ဘာထဲမှာ...။ အမွဲကွားနရေတဲ့ နားတှထေဲမှာ ဝါဂှမျးတှဆေို့ထားလိုကျတယျ။ တိတျဆိတျသှ...
" Sky Lodge Ngapali " - အလုပျပိတျရကျ ​ကြောငျးပိတျရကျ​တှမြေား​နသေလား.. ငပလီကို လှမျးလာခဲ့ဖို့ ဖိတျ​ချေါပါတယျ​နျော " Sky Lodge Ngapali " Hotelသဈ ဖှငျ့ပှဲအ​နနေဲ့ တဈညကို ၃၅၀၀၀ကပျြနဲ့ ...
Rita, Evergreen Sky !
ဘီအိုဘီအို ဟု ချေါပါသညျ in Unicode - Original Zaw Gyi Post - http://ritako.blogspot.com/2010/10/blog-post_10.html Bo Bo 08/10/2010 at 10:44 Reply ဆရာတုတျက နှားပလာတာကြှေးသကိုးဗြ ယောငျယောငျအိုးတ...
調理師でさまざまな条件を検索できる求人サイト - 求人サイトにおいて、自分の希望する職業を検索できるのは普通のことです。現在の求人サイトのほとんどが細かくさまざまな条件などを検索できるようになっています。 職種以外の一つ目は給与面です。お金を稼げるから生活ができます。逆... The post 調理師でさまざまな条件を検索できる求人サイト appeare...
ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ကြမယ်... ဘွဲ့ ရရင် ဘာလုပ်ကြမယ် (အပိုင်း -၂) - ဘွဲ့ ရရင် ဘာလုပ်ကြမယ် "ကျွန်တော်ဒီနှစ် နောက်ဆုံးနှစ်မို့ကျောင်းပြီးတာနဲ့နိုင်ငံခြားတန်းသွားချင်ပါတယ်၊ အကြံပေးပါဦးအန်တီ" "ကျောင်းပြီးရင် ဂျပန်မှာ သွားအ...
Pantai Banyu Anjlok, Surga Baru di Malang Selatan - Pantai Banyu Anjlok - Malang memang sudah terkenal memiliki banyak destinasi wisata yang indah dan lengkap. Mulai dari gunung, air terjun, pantai dan masih...
ရုတ်သိမ်းပြီးနောက် ပြန်လည်ကြားနာခြင်း - ယုတ်မာမှုကလွဲပြီး ဘယ်လိုမှ ဗုဒ္ဓံသရဏံပန်းပင်များ ဦးခေါင်းတစ်လုံးရဲ့ ယုတ္တိယုတ္တာ လက်ပတ်အနီ မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင် ကျယ်ပြန့်သော တောအုပ် ငါ ပြုတ်ကျသွားပြီ ခင်ဗျား...
ကျွန်တော်နှင့်အမျှင် - အမျှင် ညှို့မယ့် ညှို့တော့လည်း ကိုယ်ဟာ ကိုယ်မဟုတ်တော့တဲ့အထိ . . .။ ကိုယ်ကလွဲရင် ကိုယ်ပါပဲထင်ပြီး ကိုယ့်အရေကို ဆွဲဆုတ်ပြမိရဲ့။ တစ်ယောက်အခွေဟာ တစ်ယောက်ကို ထံ...
ကမ်းခြေက မျှောလိုက်တဲ့ ပုလင်းစာ - Bon Bon ပင်လယ်အကြောင်း .... ကမ်းခြေအကြောင်းတွေ အများကြီးပြောကြရအောင်။ Daddy ပင်လယ်ကို သဘောကျတယ်။ ပင်လယ်က အားလုံးကို မျိုချပစ်လိုက်တာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ေ...
တီချမ်း ရဲ့ ကမ္ဘာ.....
အချဉ်ပေါင်း (၂) - #အချဉ်ပေါင်း (၂) တနေ့က စီးတီးမတ်ရောက်တယ် လိုတာလေးတွေသွားဝယ် ညဘက် မုန့်တွေပေါ့ လက်ဘက် ဘာညာ သာရကာ လေ....... ထုံးစံအတိုင်းရောက်တော့ စာအုပ် ဝင်ကြည့် နည်းနည...
ညို ၊ ကိုကို နှင့် ဘောလုံးရွှေခေတ် - သထုံလမ်း …. တိတိကျကျပြောရလျင် တက္ကသိုလ်မေဂျာပေါင်းစုံဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ရဲ့ဗိုလ်လုပွဲ၊ Physics မေဂျာအသင်း နှင့် Botany မေဂျာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာ သထုံလမ်း...
မင်္ဂလာပါ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ - မင်္ဂလာပါ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
ရေးချင်၍ရေးသည် ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်သည်
အစက ပြန်ဖတ် - ချောစုသည် ရေပုံးလက်ကိုင်ကိုင်းကို လက်တစ်ဖက်မှကိုင် ကိုင်းမှာ ချည်ထားသော ကြိုးကို နောက်လက်တစ်ဖက် လက်ဖျားလေးနှင့် ရွရွလေး ဆုပ်ပြီး ရေတွင်းထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းညင...
ရှားပါးသော ပဋိပတ္တိသာသနာပြု ဘုရားသားတော် အစစ်အမှန် - [image: Nge Naing's photo.] ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ (၈၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဒီနေ့ ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်နဲ့ ၈၂...
ဒုက္ခတစ်ခု - ခေါင်းအုံးကို ပြောင်းပြန်လှန်အိပ်လည်း ဒီအိပ်မက်ပဲ ဘာအစွဲမှမစွဲလို့ ဘာအစွန်းမှမစွန်းလုို့ လောက်လန်းများအတုိုင်း ဂျွမ်းထိုးသေချင်ရဲ့ မီးခိုးချင်းပေါင်းတ...
ခေတ်တခေတ်ရဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေ - အရာရာက မှောင်မိုက်လို့။ အဲ့အချိန်က ဘာအလင်းတန်းမှ မရှိ ။ ဘာအလင်းမှုန်မှ မရှိ ။ ပကတိမှောင်မိုက်နေကြတယ်။ အဲ့မှောင်မိုက်မှုထဲ တယောက်လက်ကို တယောက်ဆွဲ ကြိုးစားကြ ရ...
အဆင်းရှိသောအရပ်၊ ရနံ့သင်းသောကမ္ဘာ - ပန်းပန်ရတာ မကြိုက်ပေမယ့် ပန်းတွေကို ငေးကြည့်ရတာ၊ ပန်းရနံ့ မွှေးရှိုက်ရတာ၊ ပန်းခင်းထဲလျှေက်ကြည့်ရတာ၊ ပန်းတွေသီကုံးရတာ၊ ပန်းခူးရတာ၊ ပန်းတွေကို ထိရ၊ ကိုင်ရ၊ ငေ...
ရင်မှဖြစ်သော ကမ္ဘာ by JUNEMOE
မန္တလေးဟာ မန္တလေးအငွေ့ ရှိနေဆဲ - မန္တလေးဟာ မန္တလေးအငွေ့ ရှိနေဆဲ ------------------------------------ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း ခပ်နုပ်နုပ် ကျူးလေးတွေ ဟိုသည်ခြံဝင်း ဟိုသည်အိမ်နားလေးတွေမှာ ကနွဲ့ကယိုင် ဒါဟာ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ နယ်အတွင်း အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်းခလေးများ နှင့် ငွေကြေးပေး၍ လိင်ဆက်ဆံသူ အရာရှိ-ဘုရားလူကြီးနှင့် လူကြီးပိုင်းများ အားစတင်ဖမ်းဆီး - 4-11-2015 ယနေ့ စတင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခ့ရတဲ့ သူနှစ်ဦးကတော့ အသက် ၆၀ကျော် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းနှင့် ဘုရားလူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ် ၊ ရဲအရာရှိတွေက လိင်ပွဲစားလို အယောင်ဆော...
ဈေးဝယ်တတ်တဲ့ နေ့ -
လှမ်းမီပေမယ့် - အို… နီသွေးစိုစို ဝါညိုညက်ညက် ခရမ်းဖက်ပြန် သည်ပင်ယံ၌ ပျော်စံငြိမ်းအေး ရင်ထိမွှေးသည့် ပိုက်ထွေးညှို့ပြင်း ရွှေအင်ကြင်းကို ပြင်းပျစိတ်ညို ခူးဆွတ်လိုလည်း ...
ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်
ကောင်းကင် .. ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြောင်းလဲခြင်း - အခု ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် သန်းခေါင်ကျော်.. ခုလေးတင် အပြင်က ပြန်ရောက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က ဘန်ကောက်မှာ သာတဲ့လဟာ လိမ္မော်နီရောင်.. ဒါကြောင့်လဲ လရောင်ဖြူဖြူတေ...
အခြားအခြားသော ကြယ် တွေလို - Taare Zamee Par ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားလေးကိုဝယ်ထားခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒရာမာကားလေး တွေသီးသန့်ရွေးဝယ်တတ်တဲ့အလေ့အထအရ ရွေးခြယ်ဝယ်ယူထားတဲ့အခွေတွေထဲကတစ်ခွေပါ။ ...
Chaw Ei Thein
- Performance: Chaw Ei Thein (ACC/ Art Omi/ NYFA/ iscp Alumni) Internationally acclaimed Burmese multimedia artist Chaw Ei Thein will perform i...
ကန္တာရ ပန်းပွင့် - *ကန္တာရ ပန်းပွင့် * (၁)။ ယက်လုပ်ပြီးခါစ ပိုးကတ္တီပါ အနက်စလို ချောမွတ်နက်ပြောင်နေတဲ့ အရေပြားတွေအောက်ကနေ ကမ္ဘာကြီးကို ချောင်းမျောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဝါရစ်(စ...
♠ နတ်ဆိုးရေးတဲ့ အလွမ်းပုရပိုဒ် ♠
နွေ - . နွေ . . . ဒီနွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ် ပူလည်း ပူစေတယ် အေးလည်း အေးစေတယ် ရိုးတံတွေဟာ ခြောက်သွေ့ ကြွပ်ဆတ်နေပေမဲ့ လေပြည်အပြေးမှာ နွဲ့ယိမ်းနေပုံက နွေအိုကျဲကျဲကို ချ...
အဆုံးသတ်ခရီး မသိသော ကျွန်မ… - အဆုံးရှိနေတဲ့လမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေသောကျွန်မ..၏မိုင်တိုင်တစ်ခု အဝင်. ကျွန်မကိုယ်ထဲတွင် စီးဝင်နေသော အရာသည်... တန်ဖိုး.... တစ်ခု။ ဆက်၍ဆက်၍သွားရအုံးမ...
မလေးရှားက မြန်မာတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် မလေးဘာသာပြန် APK - မလေးရှားက မြန်မာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ မလေးဘာသာပြန် APK လာပြီနော် .... ဆွဲထားကြ ..... မလေးဘာသာစကားတွေကို ဖုန်းထဲကနေ နေ့စဉ် လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ မလေးရှား - မြ...
မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....
ဆုံးစမဲ့ သံယောဇဉ်မြစ်ကလေး - ဆုံးစမဲ့ သံယောဇဉ်မြစ်ကလေး ခင်ယွန်းပြုံးနေမိသည်။ြ...
တန်ဘိုးနဲဇာတ် - ကြွေရောင်လွလွ စက္ကူတစ်စနဲ့ လှလှပပ သေသပ်ထုတ်ပိုး ဖဲကြိုးကလေး တပ် ဈေးနှုန်းကပ်....။ လမ်းဘေးအစပ်နား ဖယောင်းပုဆိုးတစ်စ ဖြစ်သလိုပုံခင်း ...
တံခါးခေါက်သံ... - အိမ်လွမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းကြီး... တဖြည်းဖြည်းချင်း ကျော်လွှားတက်လိုက်တော့ တိမ်လွှမ်းနေတဲ့ တောင်တန်းလေးများ မျက်စေ့ တဆုံးတလျား တွန့်ခေါက် ကြေကွဲ နာ...
ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ
- ဒီနေ့ ကျနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ ဈေးထဲကို သူငယ်တန်းကလေးတွေ လေ့လာရေးလာကြတယ်။ ဆရာမက သားတို့သမီးတို့ ၂ ယောက်စီတွဲထားနော်လို့ပဲ ပြောတာကြားတယ် ယောက်ကျားလေးက ယောက်ကျားေ...
ဒီရေကျချိန် - လက်မှ နာရီကို ငုံ့ကြည့် လိုက်သည်။ cialis 40mg cialis medication generic cialis no prescription buy viagra 10mg စိတ်ထဲ ထင်သည့် အတိုင်း မွန်းလွဲ တစ်နာရီ ၀န...
ရတု @ 2011 - မေရေ ... ညီမလေး အမျိုးသားအကြောင်းပြောပြမယ်.. နားထောင်မလား လို့မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်း မမွန်ရဲ့ စကားကို ရင်ခုန်မိနေတယ်။ တသိမ့်သိမ့်ခုန်ခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းတွေေ...
ပန်းနီနီမပေးနဲ့ကွယ် မပန်ချင်ဘူး -
အစရှိ အနောင်နောင်မို့ အကျင့်ပါသွားမှာကို စိုးမိတယ် - နံနက်ခင်း တက်သစ်စ နေရောင်ခြည် နွေးနွေးက လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် စွန်းပေနေသည်။ ရော်ရွက်ကြွေတို့ ကလဲ လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ ဒီတစ ပြန့် ကြဲနေကြ၏။ ...
Mon Petit Avatar
This Post Doesn't HaveaTitle on It - The spirits of holiday is coming to an end! This is fine, even acceptable, but the very thought of going back to normal life is still aching for some of...
50.1 ဘ၀ထဲ ရွာလည်ကြသူများ - ကျွန်တော့်မှာ.. နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ သူက.. အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး။ စက်မှုဇုန်က စက်ရုံတစ်ရုံမှာ.. အလုပ်လုပ်တယ်..။ မြန်မာပြည်ရောက်နေတာ အနည်း...
ချစ်သော နိုဝင်ဘာ - နိုဝင်ဘာကို တကျော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ...။ အချိန်တွေက အကုန်မြန်လွယ်လွန်းလှသည်ဟု သူမ ထင်မိသည် ။ သို့ပေမယ့် နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ခုသောနိုဝင်ဘာလရဲ့ အဲဒ...
ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ
အကြော်စုံ ကြော်စားဖြစ်ပုံက~~~~~~ - ဆားချက်တာ (ရေးထားပြီး မတင်ဖြစ်တာလေးတွေ ပြန်ရှာပြီး တင်တော့ up to date တော့ မဖြစ်ဘူးကွယ် :D) လူတွေ ပြောနေကြတယ်... အကြော်စုံကို ကြွပ်အောင် ဆီပူအိုးထဲ ရေသန်...
SERUM -7Sep 12, 11:00 AM *သဲအိစံ*: မရေ. serum ဆိုတာ ဘာလဲဟင်. ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ. toner ပြီးရင် လိမ်းရမှာလား. moist.ပြီးမှလိမ်းတာလား. ( Cbox မှာမေးထားတဲ့ ညီမလေ...
စက်တင်ဘာ ရဲ့ ကောင်းကင်
Manchester သွား တောလား - အစ က တော့မရေးတော့ဘူးလားလို့ ခြေချုပ်ကော လက်ချုပ်ကော အကုန်မိနေတာနဲ့ မတင်တော့ဘူးလို့ စဉ်းစားလိုက်တာ ... မနေနိုင်လို့ ရေးမိပြန်ဘီ သည်းခံပြီးသာ ဖတ်ပေးကြနော် ...
iShatter : iOS5Untethered Jailbreak - http://ishatter.net/ Untethered Jailbreak for iOS5တဲ့။ iPhone 4s , iPad2နဲ့ iDevices တွေ အကုန် ရတယ်တဲ့။ ဘယ်သူစမ်းမလဲ။ ကိုယ်တော့ ဇော်ဂျီ ios5 ပေါ် ကော...
ဆိတ်ရိုးစွပ်ပြုတ် - မနေ့ကချက်တဲ့ ဆိတ်ရိုးစွပ်ပြုတ် တင်လိုက်ပါတယ်နော်။ ခုတစ်လော ရုံးပိတ်ရက်ဆို ရာသီဥတုကလည်း ကိုယ်တော်ကြီးဘက် ပါပါနေတယ်။ အဟဲ ။ ဒီအပတ်ပါဆို ပိတ်ရက် ၂ ပတ် ဆက်တိုက်...
ခြေထောက်ကိုဆွဲ .......သရဲ - Las Vegas မြို့လည်ကနေ ၁၅ မိုင်ပဲဝေးတဲ့ Red Rock Canyon ဆိုတာ ကိုကြီးကျောက်အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာနေရာပါပဲ၊ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာကျောက်လွှာသွင်ပြ...
ကြည့်မိတဲ့ သတင်း (၄-၃-၂၀၁၁) - အိုဆာကာကို ရောက်လာပြီး ၁ နှစ်ကျော်ကျော်လောက်အထိ ကျမတို့ အိမ်မှာ တီဗွီ မရှိပါဘူး။ သူရော ကျမပါ ကွန်ပျူတာ တစ်ယောက် တစ်လုံးနဲ့ပဲ နေဖြစ်ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက တွေးမ...
မာစတာကီး - စကားဝိုင်း တစ်ခုမှာ အမျိူးသမီး တစ်ယောက်က ပြောတယ် ရှင်တို့ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေနဲ့ ထည်လဲ အိပ်တော့ “ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်”တဲ့။ မိန်းမတွေက ယောက်ျား...
စက္ကူစွန် - အဖေ ကျွန်တော်တို့ကို လုပ်ကျွေးနေခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် သုံးခုပြည့်တော့မည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇရာရဲ့လက္ခဏာတွေ အပြည့်အသိပ် ချိတ်ဆွဲပြီးနှင့်ပြီ။ ဗျာတိသဘောတွေလဲ ခပ်စိ...
Myanmar food house
Myanmar News, Myanmar CNN, thithtoolwin, သစ်ထူးလွင်, drlunswe
♨ . Qu Te Kitchen
Literary Art Blog
ကလူသစ်နဲ့ အာလာပ သလ္လာပ
ကျမ ရင်ခွင်ကို မှန်တချပ်လို ရှုပြီး စာများကို ဖန်တီးပါတယ်...ရင်ခွင်ဆိုရာမှာ ကျမကိုယ်တိုင် အပါအဝင် ကျမ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေ၊ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ ဖြစ်ရပ်၊ မြင်ကွင်း အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်.. မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက စာရေးတဲ့သူ နဲ့ သူရေးတဲ့စာ တွေကို ရောနှောထင်ဟပ် မပစ်လိုက်ကြဖို့ပါ.....
အချိန် နှင့် ရင်ခွင်တစုံ ငှားရမ်းခဲ့ခြင်း အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင်...